Qormadii Royal (Maxamed Axmed Cali Royal) – IFIYE
Qof ka hadalQormooyinSheekooyinXulka
Wuxuu ku dhashay magaalada Madurai, ee ka tirsan gobolka la yiraahdo Tamil Nadu, ee ay dagaan Hindida madow ee la yiraahdo Tamil. Waxaa dhalay qoys dhaqaale ahaan meel dhexaad ah, Aaabihiis wuxuu u shaqeyn jiray warshad koronto, oo kutaal magaalada Jenaay, ee caasimadda gobolka Tamil Nadu. Carruurnimdiisii telefishan kartoon kama daawan, safarna baabur raaxo kuma aadin dhaqaalaha dartiis, laakin wuxuu ahaa ehel waxbarasho.
Aabihiis wuxuu ahaa maamulaha warshadda, waxeyna warshaddu sameyn jirtay qalabyar oo korontada dhaliya, dhibka iyo sida aabihiis uga fikiro farsameynta iyo cillad bixinta qalabkaas ayaa aad u dhiira galin jirtay.
Kasoo billow 12 jirkiisi wuxuu ahaa dhallaan ku waalan Teknoolojiyadda, markii aabihiis uu guriga keenay Telfoon Landline ah, isaga waxey uga dhigneed falaad uu maskaxdiisa ku furfuray kuna mashquulin jiray, wuxuu xasuustay numberkasta oo uu gacantiisa ku garaaco, halka dadku ay qortaan numberrada, keliya kuma waaleyn xusuusta numberada ee wuxuu kaloo ahaa Kabtanka kooxda Kirikitka ee iskuulkiisa.
Wuxuu uga baxay dugsi hoose, sare iyo Jaamacadda heerka kowaad caasimadda Jenaay, ee gobolka Tamil, kadibna wuxuu shahaadada labaad ka qaatay Jaamacadda Stanford ee dalka Mareykanka.
Shaqadiisi ugu horreysay wuxuu ka billaabay shirkadda Mckinsey & company ee ka shaqeysa la talinta ganacsiga iyo mareynta maamulka.
Wuxuuse billaabay safarkiisi shaqo iyo xirfaddeed markuu 2004 kusoo biiray shirkadda Google, 7 sano kadib aas-aaskeedii. Waxay ahayd kowda April maalinta beenta adduunka, markii ay shirkaddu soo wacday laguna yiri, waanku qaadanay, isagu laakin uu rumeysan waayey isagoo u haysta in lagu ciyaarayo, laakin wuxuu xaqiiqday markii wareysiga lala yeeshay, looguna bishaarayey in loo qaatay xafiiska guud ee wax soo saarka adeegyada ee Google, ninkaas waa Sundar Pichai, CEO ga guud ee shirkadda Google.
Sheekada aas-aaska Google waxey ka billaabataa saaxibada Larry Page iyo Sergey Brin markii ay ku kalmeen Jaamacadda Stanford, kadibna ay jaamacadda usoo jeediyeen iney xal u hayaan dokumentiyada Jaamacadda ee aangaaray, kaas oo ah iney ku aruurinayaan Computer kadibna ay u sameynayaan meel laga raadsado sidaasna ay cilmi baarayaasha iyo ardeydu ugu heli karaan fursad ay ku aqristaan malaayiinta dokumenti ee jaamacaddu leedahay. Markii lagu guuleystay qorshahaas oo ay jaamacaddu ku najaxday, waxey u fikireen iney fikraddii Business u badalaan, una raadiyaan maali galin, oo ay keenen xal sida dhammaan dokumentiyada adduunka yaala, sidaas oo kale lagu heli karo iyadoo lasoo galayo oo keliya website yar oo leh meel lagu qori karo, waxa qofku uu raadinayo. Waxey ku shaqo billaabeen garaash yar, waxey heleen maal gelintii ugu horreysay 1998, waxeyna ahayd 100kun oo dollar, laakin sanad kadib 1999 waxey haysteen 25 Milyan oo dollar, waxeyna daganayeen sar ku taalla Mountain View.
Sundar Pichai wuxuu la kowsaday shirkadda Google oo ku socota dardar Teknoolojiyadeed iyo mid dhaqaale oo xawli ah, kacdoon kaas ayuuna qeyb ka noqday, wuxuu noqday gacanta midig ee Larry Page oo markaas ahaa CEO ga shirkadda. Sundar wuxuu soo hoggaamiyey mashaaric badan oo ay shirkadda Google suuqa ku qabsatay, sida website kiciyaha Google Chrome, maskaxda computerka ee Google iOs, sidoo kale wuxuu soo maamulay Softiwareka Mobilada Casriga ah ee layiraahdo Anroid, ee haysta suuqa Mobileda 90%.
Shirkadda Google waxey Oct 2, 2015 u magacawday madaxa ugu sarreeya shirkadda Google Sundar Pichai, taas oo dunida ganacsiga iyo Teknoolojiyadda ku noqotay la fila waa, aan suurtagali Karin. Waxaa suuqyada Teknoolojiyadda iyo warbaahinta qabsaday sida loogu magaacbi karo shirkadda mantaa dunida ugu sumcadda iyo dhaqaalaha badan xagga Teknoolojiyadda oo xitaa ka sara martay Apple. Waxey madaxda Google sheegeen in Sundar yahay wiil dhallinyar kana soo dhexbaxay shirkadda leh aragti hoggaamineed, fahmi kara Meesha suuqa Teknoolojiyaddu u socdo. Sundar waa wiil waxkasta ugu yaraan ka haysta fikrad, lehna awood maamul iyo karti xallineed, wuxuu aragti ka haystaa meelo kala duwan oo jiritaanka shirkadda muhiim u ah, sida ganacsiga, teknooloojiyadda, sharciga, suuqgeynta, iibinta, naqshadeynta, xiriirka macaamiisha iyo ilaalinta sumcadda shirkadda.
Sida ay sheektay shabakadda ka faalloota ganacsiga iyo maalqabeenada ee Forbes, Sundar wuxuu ka midyahay hoggaamiyahaasha shirkaddaha ee dunida ugu awoodda badan waqtigan, waxey shirkaddiisu sanad kaan siisay adduun lacageed oo gaaraya $183 million , kaas oo noqonaya qiimihii lacageed ee ugu sarreeyeu abid ee shirkaddu siiso maamulayaasheeda. Waa abe dhalay labo caruur ah, lehna hal xaas, mushaarkiisii ugu dambeeyey waa 183 Milyan sanadkii kaas oo ka dhigan bishii inuu qaato 15 milyan oo dollar.